Nhau - Makomborero echiedza chesimbi villa
Kune zvikonzero zvakadzama nei iyo mwenje simbi villa system, inosanganisira imwechete-ine dzimba uye yakawanda-ine dzimba dzimba nedzimba, iri kukura nekukurumidza. Zvichienzaniswa nedzimwe mhando dzesimbi mamiriro edzimba, iyo TUOOU mwenje simbi yakasanganiswa dzimba sisitimu, kunyanya inotonhora-yakaumbwa yakatetepa-yakakomberedzwa mwenje simbi keel dzimba, ine yakasarudzika yakazara yakazara zvakanakira:
(1) mwenje simbi villa mwenje, yakasimba simba, yakanaka kudengenyeka kwenyika kuita, chengetedzo yakakwira. Icho chivakwa chaicho chakareruka, ingori hafu yehuremu hwekongiri mamiriro.
(2) iyo yakajeka simbi keel sisitimu yezvinhu uye zvishongedzo kugadzirwa kwefekitori uye michina, yakakwira degree rekushambadzira, zviri nyore kuwana kuita kwemaindasitiri, kwemaindasitiri, inogona kupfupisa iyo yekuvaka
(3) Chikamu chechikamu chechikamu chidiki, icho chinogona kuwedzera nzvimbo inoshanda yechivako neinenge 8% zvichienzaniswa nekongiri mamiriro. Denga rinotora simbi truss chimiro, icho chinogona kuvaka yakapfuma uye yakawanda-mativi edenga fomu, kutaridzika kwakanaka, uye kusangana nezvinodiwa zvechivako.
(4) Mvura yemukati uye mapaipi emagetsi anokwanisa kuvigwa kumadziro, aine shanduko dhizaini uye inoshandurwa nyore. Iyo yakakodzera yekutora kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye simba-rinoponesa madziro bhodhi, pasi rakanyorwa uye padenga pani ine yakakwira tekinoroji zvemukati, uye ine yakanaka simba yekuchengetedza mhedzisiro.
(5) Chiedza simbi yekuvakisa ruzha idiki, diki yekuvakisa marara, izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinonyanya kugadziriswazve kana zvigadzirwa zvinogadziriswa, zvinoenderana nedziviriro yezvakatipoteredza, zvinoenderana nezvinodiwa zvekuvaka zvakasvibirira nekusimudzira kwakasimba, ndezve chivakwa chekudzivirira kwezvakatipoteredza.
(6) Inofananidzwa neyakajairika zvidhinha kongiri mamiriro, iyo yakazara simba rekushandisa kwechiedza simbi mamiriro ndeye 30% uye kabhoni dhayokisaidhi inodonhedzwa ne67%.
Sekureva kwemhedzisiro yekushandisa kunoshanda, mutengo wekuvaka wesimbi sara villa system mune yekudengenyeka kwenzvimbo uye yakapfava ivhu hwaro hwakadzikira zvishoma kana kuenzana kupfuura iyo yakasimbiswa kongiri chimiro sisitimu, iyo ine makwikwi akasimba. Tichifunga nezvekushandisa kwenguva yakareba, kusimudzira maitiro uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza, mwenje simbi villa ine yakanaka yekusimudzira tarisiro uye hombe musika kudiwa, iyo inozove zvishoma nezvishoma ive itsva "yekutengesa nzvimbo" mumusika weimba. Kunyangwe dzimba dzakareruka dzesimbi dzisati dzave kushandiswa zvakanyanya muChina, tinotenda kuti mune ramangwana riri pedyo, dzimba simbi dzakareruka dzichatumbuka kwese kwese kuChina.